Ny fampiharana zaza 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny zazakely dia maneho ny fiandohan'ny fiainantsika, ka izany no mahatonga azy ireo tsy afa-manoatra ary mila fitandremana sy fikarakarana be dia be amin'ny fitomboana mahasalama. Tsy mora ny mikarakara iray, ary kely kokoa raha miresaka maro amin'ny fotoana iray isika. Na izany aza, ity asa ity dia manamora tokoa raha manana fampiharana feno izay mamela antsika hanara-maso, hikarakara sy hikarakara zazakely.
Izany indrindra no antony anoloranay anao ity lahatsoratra ity, iray izay ho hitanao fampiharana marobe ho an'ny zazakely izany dia natao hanampiana anao hikarakara sy hanatrika azy, miaraka amina fanaraha-maso tena ilaina tokoa, ary ambonin'izany rehetra izany ho an'ireo ray aman-dreny vao manomboka maniry hikarakara tsara indrindra ny zanany.
Etsy ambany izahay mitondra anao andianà fampiharana 6 tsara indrindra ho an'ny zazakely amin'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo iray na izy rehetra. Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika anatiny, izay ahafahana miditra amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fampiasa premium sy mandroso. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
2 Fanaraha-maso ny zazakely - Fahanana sy diapering
3 Diary zazakely
4 Diarin'ny zazakely - fanaraha-maso fampinonoana sy fikarakarana
Manomboka amin'ny Baby Connect, fitaovana iray mora hanarahana ny zaza, satria manana faritra, toetra sy fiasa maro momba an'io izy, ary ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny fifehezana ny fitomboana sy ny vaksininy, izay azo zahana amin'ny alàlan'ny sary, ary koa ny fivoaran'ny zaza, salan'isan'ny isan-kerinandro, fanafody ary maro hafa.
Ity fampiharana ity dia manana famantaranandro, fampandrenesana ary fampahatsiahivana izany dia hitazona anao ho vaovao, ny mety fandefasana mailaka sy fanondranana ny angon-jazakely ary izay rehetra notahirizinao tao anaty rindrambaiko. Manome anao interface tsara mora ampiasaina sy data tsy manam-petra koa izy io, ka mamela ny fanaraha-maso ny zaza mandritra ny fitomboany, ny fivoarany ary ny fivoarany mandrapahatongan'ny fahazazanao.
Azonao atao ny mamorona hazo, manoratra hetsika, mikasa, maka sary, manara-maso ny torimaso sy izay rehetra mifandraika amin'izany, mandefa hafatra, mandahatra asa ary mifehy ny sakafo sy ny fotoam-pisakafoanana, ary koa ny lanjany, ny habeny ary maro hafa.
Mandritra izany fotoana izany dia mamela hizara ny angon-drakitra sy ny fivoaran'ny zazakely amin'ny vady (vady na vady), mpitaiza zaza, mpitsabo zaza ary maro hafa. Ho fanampin'izay, manana tranokala izy, izany hoe www.babyconnect.com, ahafahanao mitahiry ny fampahalalana rehetra, ny fivoarana ary ny angona voatahiry. Azonao atao koa ny miditra amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny telefaona hafa. Baby Connect dia fampiharana tena tsara hanarahana ny zanakao.
Developer: Rindrambaiko Seacloud
Fanaraha-maso ny zazakely - Fahanana sy diapering
Ity dia fitaovana tsara iray hafa hikarakarana sy hikarakarana ny zazakelinao, satria manampy anao amin'ny fizotrany sy ny asany ary ny mampiavaka azy izany. Izy io dia misy fiasa toy ny famatorana torimaso sy sakafo, mba hahafahanao, ohatra, mahazo ny ora tsara indrindra hatoriana amin'ny zanakao, mifototra amin'ny fotoana hatory, ary haharitra hafiriana ny fampinonoana. Ho an'izay. .
Mazava ho azy, toy ny fampiharana tsara rehetra amin'ny fanaraha-maso ny zaza, ny fivoarany sy ny fitomboany, Izy io dia miaraka amin'ny fampahatsiahivana sy fampandrenesana izay hilaza aminao hoe rahoviana ianao no hanome sakafo azy sy maro hafa. Izy io koa dia manana fizarana amin'ny fisoratana anarana ny famahanana ny zaza, izay ahafahanao mampiasa ny kalandrie fampinonoana hanoratana ny ora isakin'ny sakafo tsirairay, soraty ny sakafo rehetra isaky ny tavoahangy (ronono, ronono vovoka, ronono omby ary ronono avy amin'ny osy, ankoatry ny hafa) ary mariho ny valiny amin'ny sakafo mafy (preferences na mahazaka fanehoan-kevitra).
ihany koa manampy anao hifehezana ny isan'ireo paosy hanovanao isan'andro, mba hahafahanao mitantana tsara kokoa ny fihinanana ireo ary ny zanakao dia tsy manelingelina diapers maloto mandritra ny fotoana maharitra, satria izany dia mety hitaraina sy hanomboka hitomany. Mandritra izany fotoana izany, ity rindranasa ity dia mirakitra ny pee sy ny poofan'ny zanakao, izay afaka manampy anao hanara-maso ny zazakelinao raha voan'ny fivalanana na mety tsy ampy rano izy.
Izy io koa dia ahafahanao mizara amin'ny vadinao, ny fianakavianao ary ny namanao ny fandrosoana rehetra, ny fivoarana ary ny angon-jaza izay misy ifandraisany amin'ny firaketana ny torimaso, ny sakafo, ny fitondran-tena, ny hetsika ary maro hafa, ary koa Ampifanaraho amin'ny rindrambaiko maro amin'ny fotoana iray ny angona rehetra.
Ny zavatra hafa dia izany azonao atao ny manara-maso mora foana ny habe sy ny lanjany amin'ny fizarana somary tsotra. Ity fampiharana ity dia ahafahanao mandinika ny fivoaran'ny zaza sy mampitaha azy amin'ny salan'isan'izao tontolo izao. Ny zavatra iray hafa dia ny fananana sary izay azonao ahitsy ho an'ny zaza tsy tonga volana.
Baby Tracking - Feed and Change Diaper dia fampiharana tena ilaina sy mahomby amin'ny fikarakarana sy ny fiheveran'ny zaza. Tsy ho an'ny zava-poana dia misy fampidinana mihoatra ny 100 ao amin'ny Play Store ary isa naoty 4.7 kintana, izay mifototra amin'ny fanehoan-kevitra tsara an'arivony momba ny fiasa rehetra atolotray.
Developer: Fahasalamana mora
Tsy maninona na ray aman-dreny vaovao ianao ary tsy manana traikefa be na tsy misy. Baby's Diary dia rindrambaiko izay manatanteraka ny asany sy ny tanjony mitovy amin'ireo natolotry ny roa voalaza etsy ambony, noho izany dia napetraka ihany koa ho fitaovana tena tsara hikarakarana, hikarakarana ary hanala zaza.
Amin'ny Baby Diary dia azonao atao ny mitazona fanaraha-maso feno amin'ny famahanana ny zazakely amin'ny sakafo matanjaka, ny karazan-tsakafo laniny sy ny laniny laniny isan'andro. afaka koa firaketana ny famahanana tavoahangy ary araho ny tratra tsirairay isaky ny sakafo, na miaraka amin'izy roa, raha toa ka manome sakafo ny zazakely amin'ny tratra roa ianao mandritra ny fotoana fampinonoana iray ihany. Tena azo ampiharina amin'io lafiny io.
Fampiasana iray hafa izay mety tena ilaina amin'ny reny maro dia ny amboarina ny isan'ny ml na ozy ronono alaina isaky ny nono. Ankoatr'izay dia manana fiasa izay ahafahanao manara-maso ny fiovan'ny diapers, ary raha maloto, mando na roa izy ireo, ary koa firy ny diaper matetika novaina isan'andro, izay manampy amin'ny fitantanana tsara kokoa an'ireo. Ny zavatra iray hafa dia miaraka amin'ny fampinonoana sy ny ora fatoriana, mora ajanona sy mamerina.
Tsy azonao adinoina ny fanaraha-maso ny habeny sy ny lanjany, zava-dehibe tokony ho fantatra ny fivoaran'ny zaza isan'andro sy isan-kerinandro ary isam-bolana. Ary koa, toy ny hoe tsy ampy izany, Izy io dia miaraka amin'ny fampahatsiahivana sy fampandrenesana momba ny hetsika izay efa nalahatrao tamin'ny alàlan'ny fampiharana. Ho an'izay sy bebe kokoa, Baby Diary dia fampiharana tsara hafa hanarahana ny lisitry ny kely ary fitaovana tsara ho an'ny reny vaovao ary na dia ireo efa manana traikefa aza.
Diary zazakely. Firaketana fampinonoana 👶
Diarin'ny zazakely - fanaraha-maso fampinonoana sy fikarakarana
Fampiharana tena tsara iray hafa ho an'ny fanaraha-maso sy fikarakarana ny zaza dia, tsy isalasalana, Baby Daybook. Ary io fitaovana ho an'ny reny io dia manana izay ilainao amin'ny fikarakarana zaza ary na dia ho an'ny zaza vao teraka aza.
Izy io dia mety amin'ny fandraketana ny hetsika ataon'ny zaza rehetra, toy ny sakafonao, torimaso, fitsaharana ora maro ary maro hafa. Izy io dia manana fizarana rakitsoratra sy fanamarihana, ary ny famintinana isan'andro ny zavatra rehetra voamarika sy vitan'ny zazakely dia ahafahanao mahita ny statistika sy hanivana ireo hetsika amin'ny fikitika tsotra, izay hanampy anao hahalala bebe kokoa azy ary, noho izany, manatrika sy mikarakara tsara indrindra.
Ny fiasan'ity rindranasa ity dia ahafahanao mahafantatra zavatra toy ny faharetan'ny fotoana farany nanomezanao ny zaza, raha naka hatory kely izy ary tamin'ny ora firy, firy ny popoka novaina nandritra ny andro ary maro hafa. Io dia ahafahanao mitantana tsara kokoa ny ora anananao, ary koa ny an'ny zazakely, mazava ho azy.
Etsy ankilany, miaraka amin'ny Baby Daybook dia afaka mitondra a fanaraha-maso ny fampinonoana, tavoahangy (raikipohy), fisotroana, sakafo matanjaka, torimaso, fanehoana ronono, fandroana ary fanaraha-maso fanafody. Mandritra izany fotoana izany dia ahafahanao manara-maso ny halavan'ny zaza sy ny lanjany, ary koa ny angona hafa momba ny fitomboany sy ny fivoarany.
Azonao atao ny manara-maso zaza mihoatra ny iray (zavatra tsara raha kambana ianao, ohatra). Etsy ankilany, raha te hanana fampifanarahana marobe amin'ireo fitaovana maromaro ianao dia afaka miditra amin'ny kinova premium.
Mba hamaranana ity fanangonana ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny zazakely amin'ny tongotra havanana ity, dia manolotra anao amin'ny Breastfeeding izahay, fampiharana iray hafa ho fanaraha-maso ny zaza izay manam-pahaizana manokana amin'ny fisoratana anarana ny famahanana ny zaza.
Ity fitaovan'ny renim-pianakaviana vaovao ity dia famenon-tsakafo sy fikarakarana tsara ny zaza satria manampy amin'ny firaketana ny fampinonoana ny tratra na ny tavoahangy, ny fampinonoana ny nono, ny fanovana popoka ary maro hafa.
Izy io koa dia ahafahanao mitazona rakitra an-tsoratra hafa momba ny fivoaran'ny zaza ary miaraka amin'ny fampahatsiahivana, fampandrenesana ary maro hafa izay manampy anao amin'ny traikefa voalohany amin'ny maha-reny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana zaza 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Poco M3 Pro, Redmi Note 10S ary Redmi Note 10 Pro amin'ny vidiny tsy hay tohaina